“Pogba iyo Neymar waa sida caruurta da’adooda ka yar tahay 11 sano jir!” – Gool FM
(Yurub) 23 Luulyo 2018. Ciyaaryahankii hore ee kubada cagta Ingariiska Stan Collymore ayaa si adag u dhaleeceeyay ciyaartoyda haatan, Wuxuuna ku tilmaamay kuwa aan wali qaan gaarin, isla markaana ah sida caruurta 11 sano jirada!
Stan Collymore ayaa dhawaan siiyay wargeyska “Mirror” wareysi dhinacyo badan taabnayay wuxuuna si gaar ah u weeraray labada xidig ee Pogba iyo Neymar Jr, kadib dhacdada ugu weyneed kubada cagta ee koobka aduunka 2018 ee dhawaan lagu soo gaba gabeeyay dalka Russia.
“Waxay u dhaqmayaan caruurta ay da’adooda ka hooseyso 11 jirada, sida xidigaha Neymar, Pogba iyo saaxiibadood kale, waa sida ciyaartoyda 11 jirada ee kubada cagta”.
“Kuma wanaagsana qaabka xirashada dharka iyo qaabka timaha loo hagaajiyo”.
“Brian Clough iyo Sir Alex Ferguson waxa ay heysteen kuwa jecel ciyaartoyda timahooda iyo muqaalkooda ay wanaagsan yihiin, islamarkaana guursanaya xilli hore, sababtoo ah waxay muujineysaa qaan gaarnimadooda”.
“Laakiin waxaad muudoo in kubada cagta haatan aragti ahaan ay ka duwan tahay”.
Xiriirka kubadda cagta Germany oo war ka soo saaray eedeyntii Ozil iyo ka fariisashadiisii xulka